Kullamadii laga ciyaaray La Liga iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Kullamadii laga ciyaaray La Liga iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay.
Axad, November, 25, 2018(HNN) Eibar 3-0 Real Madrid
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee ciyaarta isku dayday wadar shan darbo ah, waana darbooyinkii ugu yaraa ee ay sameeyaan dhammaan tartamada tan iyo markii kooxdan loo magacaabay Santiao Solari.
Keliya Huesca oo laga dhaliyay 19 ayaa ka badan Real Madrid kooxaha goolasha ugu badan laga dhaliyay xilli ciyaareedkan, waxaana Los Blancos shabaqooda lagu dhex riday 16 gool.
Karim Benzema ayaa waxaa laga soo qabtay toddobo garab-dhaaf (offside) kullankii Eibar, waxaana ay ka dhignayd garab-dhaafyadii ugu badneyd ee hal ciyaar oo La Liga ah laga dhgio xirfaddiisa Real Madrid.
Sergio Busquets ayaa saftay kullankiisii 500-aad ee kooxda Barcelona, waxaana uu noqday ciyaaryahankii toddobaad u saftay Barcelona 500 kullan dhammaan tartamada, iyo ciyaaryahankii saddexaad ee darajadaas gaara ee ka ciyaara khadka dhexe, ka dib Andres Iniesta (674) iyo Xavi Hernandez (767).
Diego Costa ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee uu Barcelona ku xisaabsado xirfaddiisa, waxaana ay ku qaadatay kullankiisii 10-aad.
Ousmane Dembele ayaa dhaliyay goolasha ugu badan ee lugta bidix uu ku dhaliyo lugta midigna ay caawisay (ku hor taabtay) xirfaddiisa koox iyo qaranba, waxaana uu sidaas gool ku dhaliyay 16 jeer.
Dembele waxa uu beddel kusoo galay kullankii Barcelona iyo Rayo Vallecano ee 3-da November, waxaana uu dhaliyay goolka bareejada daqiiqaddii 87-aad, kullankii Atletico Madrid-na waxa uu dhaliyay goolka bareejada daqiiqaddii 90-aad isagoo beddel kusoo galay.
Ma jiro ciyaaryahan ka badan Ousmane Dembele oo goolkiisa dhibco lagu helay dhammaan xilli ciyaareedkan La Liga, waxaana uu shaqeeyay toddobo dhibcood shan gool oo uu dhaliyay.
Kullamadii laga ciyaaray La Liga iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay. added by admin on November 25, 2018